ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ပထမဦးစွာ Impressions – usernames
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဒီဇင်ဘာ. 11 2019 |2မိဖတ်ပြီးသား
JDate တွင်, ငါမသရုပ်အကြောင်းပြချက် mysterE32 ပြောင်းမှီတိုင်အောင်ငါ nyfunnyguy32 ခဲ့သည်. သင်သည်အဘယ်သို့ငါရွေးကောက်သော monikers အကြောင်းဆို, ဒါပေမဲ့သူတို့လူတိုင်းလိုအသံမပါဘူး. MysterE သုံးပြီးစကားများပေါ်တွင်ဆော့ကစားဖြစ်သည်, သိသိသာသာ, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို “နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ” ငါ၏ပထမဦးဆုံးကနဦး. တကယ်တော့အချိန်ဖို့အချိန်ကနေအပေါ်ချီးမွမ်းရ. ကျွန်မ New York မှာနေထိုင်နေခဲ့ကြလျှင် Nyfunnyguy ကောင်းတစ်ဦး၏နာမတော်မူမည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမဲ့, Los Angeles မှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား, ဟာသကရေးသားခဲ့သည်သူတစ် East Coast ကောင်လေးကစကားစတင်ရန်အခြေခံကောင်းများဖြစ်ပါသည်. တစ်ခါတုန်းကတစ်ဦးစန်တာမော်နီကာဘားမှာငါ့အသုံးပြုသူအမည်ဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတောင်, “ဟေ့, Nyfunnyguy!”, ကအလွန်အရေးပါတဦးကထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားသည်, အရှက်အရာ n လျှင်, ငါ့ကြော်ငြာခြင်းထိရောက်သောခဲ့. သူမပြီဟုမိန့်တော်မူ၏မယ်လို့ယုံမှားသောစိတ်ဝင် “ဟေ့, Mike1234” ငါ့နာမကိုခဲ့ကြသည်လျှင်.
username နဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းကဲ့သို့သောအရာများအွန်လိုင်း daters တွေအများကြီး၏ဘေးထွက်၌စူးသောဆူးများမှာ. ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, အဘယ်သူမျှမယ့်ဒီအချက်တွေဂရုစိုက်ကြောင်း, သူတို့ပြုကြ? အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အဖြေမရှိ. ကအတော်လေးကောင်း egregiously မကောင်းတဲ့သို့မဟုတ် N ပိုခဲယဉ်း N ၏မဟုတ်လျှင်. A ကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအမည်တကယ်တော့စကားပြောကိုစတင်နိုင်ပါသည် – ငါအရမ်းအကြောင်းပြချက်များအတွက် BePatientImBlond နှင့်အတူစကားပြောလျက်စတင်. ကျွန်တော်တခြား clients များအကူအညီပေးင် (အဘယ်သူသည်အသုံးပြုသူ-အမည်မဲ့ကြွင်းရ), သူတို့ profiles တွေမှာကြီးစွာသောတုံ့ပြန်ချက်များကိုရပြီမသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ username များအပေါ် kudos အဖြစ်ကောင်းစွာ.
ဒါဇင်အနည်းငယ်အဖွဲ့ဝင်များမှတဆင့် Browse နှင့် username များထွက်မတ်တပ်ရပ်မည်မျှရေတွက်. များစွာမ, ငါသည်သင်တို့ကိုအာမခံ. တဦးတည်းကိုရွေးချယ်အလုပ်သမားတဦးအတွက်မဆင်ခြင်သို့မဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိင်အားလုံးကြောင့်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အပိုမိုင်မလိုက်မသွား? သင်ချစ်မယ့်ဘာသာရပ်ကိုရွေးပါ. ဒါဟာသင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြောစရာမလိုဘူး, သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. သို့မဟုတ်တကယ်ကိုဘာမှမ. ပဲတစ်ခုခုပျော်စရာ. သင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌ပတ်လည်စိတ်ကူးငင်မဝင့, ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်ကနေအလင်းကတက်ကိုင်ထား. တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, တစ်ခုခု pop ကိုသွားဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်တစ်ခုခုကိုသင့်ရဲ့ username ဖြစ်သွား. အကောင်းဆုံးကိုသူများများသောအားဖြင့်စကားလုံးအပေါ်ကို double entenders သို့မဟုတ်ပြဇာတ်များမှာ; အကျွမ်းတဝင်ယူပြီးကြောင့်ကွဲပြားခြားနားအောင်. Mystery လိုပဲ, ဥပမာအားဖြင့်. သင်အကြံပြုမည်သို့ပင်, တစ်ဦး punny ရှိပါတယ်, အကယ်. မရယ်စရာ, အဖြေ.
Oh, စလာသည်! ၏သင်တန်းကိုသင် UrbanMiff ရေးလိုက်တာပေါ့! ငရဲ, ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အမည်ကိုကြောင့်လွင့်အသုံးပြုခြင်းထင်.
usernames အံ့သြဖွယ်အရေးကြီးလှသည်, သူတို့ dealbreakers င်မ, ဒါပေမဲ့သူတို့စာသား website တစ်ခုအပေါ်သင့်ရဲ့အထောက်အထားင်ကြောင့်. သူ JayhawksRock ဖြစ်နိုငျသောအခါအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှ TopekaTim ဖြစ်လို?
သင်ကကုန်စုံရောက်နေပေါ်တွင်ရပ်တဲ့အခါသင်ကလူပြိန်းကြိုက်သတင်းစာတစ်စောင်ကောက်စေသည်အလွန် boldface အမျိုးအစားကဲ့သို့ပင်, username များအတွင်းကြည့်ရှုရန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်. ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတန်းတူကျန်ရှိနေသော, ထိုဓာတ်ပုံကိုပျှမ်းမျှလျှင်, သင်ရုံတစ်လိုင်းတည်းကို အသုံးပြု. ရယ်မောဖန်ဆင်းတော်မူသောသူတစ်ဦးဦးကိုကြည့်ဖို့သွားမယ့်ငါ့အကိုပြောပြကြသည်? သင်သွားရေကန်၏ရေတိမ်ပိုင်းအဆုံး! ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ username များလွဦးနှောက်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်များမှာ.